Pyonepan Way: 2014
ကျမ မျက်ရည် ယူသွားပါမောင်
ဒါဟာ အပြစ်မဟုတ်တဲ့ ဖြူစင်ခြင်းနဲ့
ကျမခေါ်ရင် ထူးပါ မောင်
Posted by Toe Yee Yee at 2:39 AM No comments:
သင့်အတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ အောင်မြင်ခြင်းတွေဆီကို
သင့်အတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ အဆိုးဆုံးအခက်အခဲတွေကိုလဲ
သင့်အတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ တစ်ခြားသူတွေအပေါ် မှီခိုခြင်း
ကင်းစွာနဲ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်သွားတတ်အောင် သင်ပြပေးနိုင်တယ်
မျက်ရည်ကျစရာ သင်ခန်းစာတွေ ခံစားလိုက်ရတိုင်း…
Posted by Toe Yee Yee at 4:07 AM No comments:
ပိုကောင်းလာခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ ။ ။
6 , 10 ,20 1 4
Posted by Toe Yee Yee at 8:04 PM No comments:
***" အလွမ်းခြွေတဲ့ ဆောင်း "***
မောင်မပါ.. ဒီလမ်းး မောပန်းလွန်းလှတယ်...။
နှင်းပွင့်လေးတွေ အရောက် နောက်ကျခဲ့တယ်...
ဆောင်းဟာ မပီပြင် ၀ိုးတ၀ါးနဲ့...
မေ ဘယ်လို ချမ်းမြေ့နိုင်ပါ့မလဲ....။
နှင်း ချွေခဲ့တဲ့ ဆောင်းဟာ...
မေ့ ရင်ကို အပူတိုက်နေခဲ့တယ်...
တစ်သက်မခွဲ တွဲမယ့် လက် ဆို.....
မေ ဘယ်လို ဖြေရမှာလဲကွယ်....
မေကလည်းးး တစ်ခုပ်တရ တွဲထားပါလျှက်...
ကမ္ဘာတစ်ခြားစီ... ပြုတ်ထွက် ဝေးကွာခဲ့ရတယ်....။
မေ လွမ်းနေတယ် မောင်ရယ်.......
အလွမ်းတွေကို... ပန်းလို မမျှောချင်ပေမယ့်....
ကျမပဋာ ရင်မှ... သောကအပူ...
၀ဋ်ကြွေးရှိက ဒီဘဝမှာသာ.. ပြေပါရစေ မောင်ရယ်...။
Posted by Toe Yee Yee at 2:34 PM No comments:
မိုးစက်တွေ သန်းပေါင်းများစွာ ထဲ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကို ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ် ငိုနေမယ့်မျက်ဝန်းတွေကို ကောင်းကင်ပေါ်မော့လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေအကုန် ရောက်ရာပေါက်ရာ စီးဆင်းသွားပေမပေါ့ ဒီစိတ်နဲ့ ငါ ငိုတယ် တိတိပပ မရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနောက်လိုက်ရင်းကြေကွဲနေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်တွေ အယောင်ယောင်အမှားမှား လေ လွင့် တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကို ညာတယ် ငါတို့ ပျော်ခဲ့ကြဘူးလား။ကိုယ့်နှလုးံသားကို ရိုက်ပုတ်ပြီးပြန်မေးကြည့်ရတယ်
Posted by Toe Yee Yee at 2:13 PM No comments:
ဗိုက်ဗာဖေ့ဘုတ်အရင်းထုတ်၍ နှာထစရာဤကမ္ဘာ ~~~~
မဟာဒုလ္လဘရခဲ့လှစွာသော အခွင့်အရေးကြီးရလိုက်သလိုပါပဲ ။
အရင်က လဖက်ရည်ဆိုင် ၊ ဆိုက်ကားဂိတ် ၊ အရက်ဆိုင်တွေကနေ
မိန်းခလေးများဖြတ်လျှောက်သွားတာနဲ့ဟေ့ဟေ့ ၊ ရွတ် ၊ ပွတ်စ် လုပ်
နေတဲ့ ပုရိသယောင်္ကျားများအဖို့စမတ်ဖုန်းတလုံးရယ် အင်တာနက်လိုင်းရယ်
ရှိရင် အိုကေမှာ စိုပြေသပ ။ နီးစပ်ရာလူတွေဆီက မိန်းခလေးလှလှ
ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေရှာ ဗိုက်ဗာမှာ အပ် ၊ ပထမ တရက်လောက်ကို ခင်ချင်
တယ် ဘာညာလုပ် ၊ ဒုတိယရက်လောက်မှာ ရည်းစားစကားပြော ၊ အဟေဟေး
ဖေ့ဘုတ်ဆိုပိုတောင်မိုက်သေး ၊ ပိုစ့်အမျိုးမျိုးနဲ့တင်ထားတဲ့ မိန်းခလေးပေါင်းများ
စွာထဲက ခေါင်းခေါက်ရွေးရတာ ကိုကိုပုရိသတို့ မာန်တောင်တက်နေသေးတယ် ။
မသိရင် သူတို့ရွေးဖို့ပဲ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး တင်ထားသလိုလို။ ပုရိသ ကိုကို တို့ပဲ
ဟန်ကျသလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ မိဘက ရည်းစားထားရင်
သတ်မယ်ကြိမ်းထားတဲ့ အိမ်တွင်းပုန်းမမ ၊ ရုပ်ရည်လေးနည်းနည်းဆိုလို့ အပြင်
မှာ မဖလန်းနိုင်တဲ့ အပျိုကြီးလေဒီတွေ ၊ ကလေးတဖက်နဲ့မို့ အပြင်ဘက်မလှည့်
နိုင်တဲ့ စင်ဂယ်မားသားတွေ အဖို့လည်း အင်တာနက်က သိပ်အသုံးကျသဗျ ။
ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပျိုပျိုရွယ်ရွယ် ၊ အိမ်ထောင်ရှိ ၊ ကလေးအဖေ ၊ ကလေးအမေ
တခုလပ် မုဆိုးမ တလင်ကွာ အစရှိသဖြင့် အပြင်မှာမဖလန်းနိုင်သူများအတွက်မူ
ဆိုရှယ်နက်ဝပ်များသည် မွှေ့လျော်ပျော်ပါးကစားရာ နေရာကြီးဖြစ်လာလေတယ် ။
ဖုန်းနံပါတ်အပြန်အလှန်ပေး ၊ ဖုန်းထဲမှာကျု ကြ ။ အို အဟင့် အဟင့် ညီမလေး
ကိုကြီး ချစ် ဆိုးတယ်ကွာ မောင် ကိုကို သဲ အစရှိသဖြင့် ဗိုက်ဗာနှင့် ဖေ့ဘုတ်တခွင်မှာ
ခေတ်သစ် လူများအတွက် တဏှာပေမတကြော တောထစရာ ဗျုဟာကွင်းပေတည်း။
မြင်မြင်သာမျှ သာဓုသာခေါ်ကြပါကုန် ။
Posted by Toe Yee Yee at 12:26 PM No comments:
သိက္ခာ သစ္စာ အရှက်အကြောက်တရားနဲ့
Posted by Toe Yee Yee at 8:48 PM No comments:
တစုံတယောက်သောသူက တယောက်ထဲ အဖေါ်မဲ့ အထီးကျန်တဲ့အခါ နားထောင်တဲ့သီချင်း တဲ့
Moe MyintMg lost urself
Posted by Toe Yee Yee at 4:48 AM No comments:
လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ် ဆိုရင် သူဟာ အတိတ်က အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ စဉ်းစာနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က အမြဲတန်း စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ အနာဂတ်ကိုပဲ အမြဲတန်း စဉ်းစားနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး အေးချမ်းနေတယ် ဆိုရင်တော့ ယခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ဗန် အကြောင်းကိုသာ စဉ်းစားနေသူ
Posted by Toe Yee Yee at 4:40 PM No comments:
ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို.... ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားးး....
ကစားတတ်တဲ့.. ရှင့်လို လူရဲ့.. ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကို... ယုံခဲ့မိတာ... ကျမ ... မိုက်လို့ပါ...။
အဲ့လို..... ကျမရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းတွေအကြား.. မတွေ့ဘဲ ပစ်ထားလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့...
ရက်လချီ ကြာ... ဝေးကွာနေရလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့... တမ်းတမ်းတတ... လွမ်းနေရလည်းးး နေတတ်တယ်ပေါ့...။
အားလပ်ချိန်ကျ..... အိပ်တော့ပေါ့.... ပျော်သလိုသာ နေပါတော့....
မခေါ်တော့ဘူးး .... မမျှော်တော့ဘူးးးး....
တစ်ချိန် တစ်ခါက... ပတ်သက် ခင်မင်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ဦးလို့ပဲ.... ကျမ သဘော ထားလိုက်ပါတော့မယ်...
ကျမက.. ရောက်လာနိုင်ဖို့.... အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေရချိန်မှာ... စကားကလေးးး.... သုံးခွန်းလောက် ပြောထားပြီးးး....
တွေ့ဆုံနိုင်ကြဖို့ကို... မျှော်လင့်စိတ်လည်း မထားးး... နှုတ်ဆက်စကားလေး တစ်ခွန်းမှ မဆိုဘဲ...... အေးအေးလူလူ ချန်သွားနိုင်ရက်တာ........။
အခုက စ... ကျမမှာ ချစ်သူ မရှိတော့ဘူးးး...
အားကိုးရာ မဲ့နေပါစေ.. ကျမရဲ့ ဘဝကို.. ကျမတစ်ယောက်ထဲပဲ... ဖြစ်သလို ရှေ့ဆက် လျှောက်ပါတော့မယ်...။
ကျမမှာ ချစ်သူ မရှိဘူးး.. ကျမမှာ အဖေါ်မွန် မရှိဘူးး... ကျမမှာ အားပေးဖေါ် မရှိဘူး... ကျမမှာ ကြင်နာသူ မရှိဘူးးး...။
ကျမ ရဲ့ အထီးကျန် ဒီဘ၀မှာ.... ကျမ မွေးလာတာလည်းးး တစ်ယောက်ထဲ.... ကျမ သေသွားတော့လည်းး တစ်ယောက်ထဲ...။
ကျမ ဖြစ်အောင် နေရဲနေရမယ်...... ကျမ ဖြစ်အောင် သေရဲစေရမယ်...
တစ်သက်စာအတွက်.... တစ်ဘဝစာအတွက်... ကျမ နောက်ဆုံးး နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်......။
ရှင်သာ... ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.....။
Posted by Toe Yee Yee at 3:04 AM No comments:
မြတ်နိုးရ ကြယ်စင် သို့ လမ်းခွဲ နှုတ်ဆက်ခြင်း
**" မြတ်နိုးရ ကြယ်စင် သို့
လမ်းခွဲ နှုတ်ဆက်ခြင်း "**
မရလျှင် ဘာမှ မလိုချင်တတ်တဲ့ ငါ့အတွက်
နင် ပေးဆပ်မဲ့ တစ်ဝက်တစ်ခြမ်း အချစ်တို့ မလိုအပ်တော့လို့……
ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ပြတ်စဲ
ကြားလူ မပါတဲ့ ဒီဇာတ်မွဲမှာ…
အရလွယ်လို့ တန်ဘိုးပြယ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုအတွက်……
ရင်ပြင်မှာ အရိပ်မိုး မခံပါရစေနဲ့တော့…
ပေးတိုင်းလည်း ပြန်မရတတ်တဲ့ လောကနိယာမ တစ်ချို့ အကြား…
သားကောင်ဖြစ်သွားရတဲ့ ကျောက်ဖြစ်နှလုံးသား တစ်စုံ…
ငါ… မေ့မပစ်ပါဘူးးး ချစ်သူ…။
တစ်လမ်းသွား ဘဝမှာ အရှေ့ နဲ့ အနောက်…
ကံဇာတ်ဆရာ အလိုကျ လျှောက်ကြရအောင်……
နင့် ချစ်ခြင်းတို့ဖြင့် မပျော်ပိုက်
နင်လည်း ပျော်သလို နေပါတော့…
လက်မကာ နှုတ်မဆက် မျက်ရည်မကျ
Posted by Toe Yee Yee at 11:06 AM No comments:
San Linn စံလင်း - Pyaung Pyan See Thaw Myit
Posted by Toe Yee Yee at 5:30 AM No comments:
`သက် ဆိုင် သူ သို့´
မ ခွဲ ချင် ၍ တွဲ ဆင် ငင် လည်း
သူ ရက် စက် စွာ ထား ထွက် ခွာ တော့
တား မရ တာ သိ ပါ ရက် နဲ့
ပိတ် ဆို့ ကာ ဆီး အနား နီး ထိ
တိုး မိ ခဲ့ တာ သိပ် ချစ် ခဲ့ လို့...
လွမ်း ရ ခြင်း ဒဏ် မ ခံ နိုင် ၍
လျှော့ ပေး လေလေ နိုင် ကျင့် နေ တော့
ပြော ပါ ရစေ တယောက် ထဲ ဘဲ
နေ တက် ခဲ့ အောင် ကြိုး စား နေ တာ
မ ချစ် လို့ မ ဟုတ် ဘူးးးးးးးးး
Posted by Toe Yee Yee at 7:17 PM No comments:
Posted by Toe Yee Yee at 3:49 AM No comments:
အပြုံးများ မချိ … လည်း …
မပါ အမုန်း …
ထာဝရ အရှုံးပေး … ချစ်နေမယ် …
Posted by Toe Yee Yee at 1:45 AM No comments:
အရှုံး ကို လက်မခံချင်သူရဲ့ လက်ထဲကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးက ရောက်မလာဘူး ။
မင်းမရှုံး ချင်ဘူးဆိုရင် နိုင်အောင် တိုက်ရမယ် ။
ဘာမှ ခက်ခဲတာမရှိဘူး ။
ဘဝမှာ ကိုယ်ဘာလိုချင်လဲ သတိရလိုက်...လိုချင်တာကို ရအောင်ယူ ။
Posted by Toe Yee Yee at 7:40 AM No comments:
ဘဝကို ပါးပါးလှီးပြီး မြည်းစမ်းကြည့်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “ခါးလိုက်တာ” လို့ ပြောနေမှတော့။
အရိပ်ပေးနိုင်ပုံရတဲ့အရာ နှစ်ခုသုံးခုကို စမ်းသပ်နားခိုကြည့်ခဲ့မိပြီးတဲ့နောက် ပူပြင်းနေတဲ့အခါ
တွေ့ကြုံသမျှကို သံသယနဲ့ ကျွန်မ ကြည့်တတ်လာခဲ့ပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ အရိပ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
(ဂျူး-မနက်ခင်းတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတဲ့သူ)
Posted by Toe Yee Yee at 2:48 PM No comments:
ကျွန်မ ထင်ခဲ့တယ် ။
သေသေချာချာ ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် အရာတစ်ခုအပေါ် ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မက်မောမှုမှာ ဥပေက္ခာနဲ့ ရောင့်ရဲခြင်းတွေ တွဲပြီး ပါလာမှာပဲ ။
ဒီတော့ အဲဒီလူဟာ ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် အရာဝတ္ထု အပေါ် မှာ နတ္တိဝါဒ အမြင်နဲ့ မြင်နိုင်မှာပဲလို့ ။
တကယ်တော့ ကျွန်မ တွက်နည်းက သွက်သွက်ခါအောင် မှားယွင်းခဲ့တာ ပါလား မောင်ရေ ။
မောင့်ကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရမှာကိုသိလေ မောင့်အပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ ရောင့်ရဲမှု မရှိတဲ့ တွယ်တာမှုမျိုးနဲ့ ယစ်မူးလေပါပဲ ။
ဆုံးရှုံးမှုကို အလွယ်တကူ ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ သာမန် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက် ထက် ပိုပါတယ်ကွယ် ။
Posted by Toe Yee Yee at 9:49 AM No comments:
ငါ ချစ်ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ချစ်သူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့နင် ဆိုးသမျှတွေ အနွံ့တာခံခဲ့တယ်...
ငါ ချစ်ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ချစ်သူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့နင် အနိုင်ယူသမျှတွေ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်...
ငါ ချစ်ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ချစ်သူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ငါ့ကိုယ်ငါတောင် မေ့ထားပြီး
အမြဲ နင့်အတွက် ဦးစားပေးစဉ်းစားခဲ့တယ်...ငါ ချစ်ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ ချစ်သူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
နင် နာကျင်စေသမျှတွေအပြစ်မမြင်မိပဲ အကြိမ်ကြိမ် သင်ပုန်းချေခဲ့တယ်...
ငါ ချစ်ရတဲ့ ငါ့ရဲ့ချစ်သူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေရခဲ့ရင်တောင်
နင့်ကြောင့်ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အစားထိုး မေ့ပစ်နိုင်စေခဲ့တယ်...
ငါ ကရော...နင် ချစ်ရတဲ့ နင့်ရဲ့ ချစ်သူပါ...
(တခုခုဆို)ဘာကြောင့်များ. . .ငါ့ဘက်ကနေ အမြဲမတွေးပေးခဲ့တာလဲ ???
~A Lynn Phyo~
Posted by Toe Yee Yee at 12:45 AM No comments:
Tin Aye Hlaing
Posted by Toe Yee Yee at 6:14 PM No comments:
လိုရာပြီးမြောက် ခရီးပေါက်သော လက်တွေ့ ရေမေတ္တာပွားနည်း
လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခု ပေးရဦးမယ်၊ အကယ်၍သာ စိတ်အာရုံညွှတ်ပြီး မေတ္တာပို့လွှတ်ပေးနေသော်လဲ တစ်စုံတစ်ဦး၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ၊ မုန်းတီးနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမယ်လို့ မထင်ရလျှင် ရေမေတ္တာ ပို့ကြည့်ပါ၊ အောင်မြင်စေရမယ်၊ ရေမေတ္တာဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
✔ နည်းမှာ- သန့်ရှင်းသော ရေဖန်ခွက် တစ်ခု ဘုရားစင်ပေါ်မှာ တင်ထားပါ၊ သန့်ရှင်းသော ကျောက်ခဲကလေး တစ်လုံးကို ဖြစ်စေ၊ သစ်သားချောင်းလေးတစ်ခုကို ဖြစ်စေ မိမိမေတ္တာ ပို့လိုသူ ကို ရည်မှတ်ပြီး ရေဖန်ခွက်ထဲ့ ထည့်ပြီး စိမ်ထားပါ။ အမှိုက်အမှုန်မကျအောင် အဖုံး ဖုံးထားပါ။
`သူ၏ စိတ်နှလုံး ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းသွားပါစေ´လို့ လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာပို့လွှတ်ပေးနေပါ။ `သူ၏စိတ် ပူဆာနေခြင်းကို အေးချမ်းသွားစေဖို့ သူ့ကို ငါ ရေစိမ်ထားလိုက်ပြီ´လို့ မိမိစိတ်ကိုလဲ ရှင်းရှင်းထားနေပါ၊ ပူပန်သောကဝင်ပြီး လှုပ်ရှားနေခြင်း မရှိအောင်နေပါ။
`သူ့ကိုငါဒုက္ခမရောက်စေလိုပါ၊ငါလဲစိတ်ချမ်းသာ၊သူလဲစိတ်ချမ်းသာ၊ နေမြဲတိုင်း နေစေရန်၊ ဖြစ်မြဲတိုင်း ဖြစ်စေ
ရန် သူ့ကို ရေခွက်ထဲချစိမ်ထားလိုက်ပြီ´လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနေပါ။
`သူ့စိတ်အေးသွားပြီ၊ သူ့စိတ်ကြည်လင်သွားပြီ၊ သူ့မှာ ငါ့ကို ရန်မူချင်စိတ်ပျောက်လွင့်သွားပြီ´လို့လဲ မိမိစိတ်ထဲက သိနေပါ၊ (တကယ် ချမ်းသာစေလိုသော စိတ်ရင်းစေတနာသာ ထားပေးနေပါ)၊ ထိုသူ့ရဲ့ စိတ်ဟာ ထိုအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မူပြောင်းလာပုံ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
သူ့ရဲ့ စိတ်အာရုံထဲတွင် မိမိက ပို့လွှတ်ပေးနေသော စိတ်တန်ခိုးကြောင့် ပူဆာ၍ ဆူပွက်၍ နေခဲ့သော သူ့ရဲ့ ဒေါသစိတ်မာန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ပြေအေးသွားလိမ့်မယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မိမိအပေါ် သနားစိတ် ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်၍ ချစ်ခင်စိတ်၊ ကြည်နှုးစိတ် ပြောင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
ချစ်ခင်စိတ် ဝင်ရောက်လာခဲ့လျှင် သူကလဲ မိမိကို မြတ်နိုးဖွယ်ရာကောင်းသော လူတစ်ယောက် အဖြစ် မြင်လာပါလိမ့်မယ်၊ ကြည်နှုးဝမ်းသာသော စိတ်လဲ ဝင်စားနေလိမ့်မယ်၊ အဲသည်နောက် သူကိုယ်တိုင် ပြောမှား၊ ဆိုမှား ရှိသမျှကို ဝန်ချကာ တောင်းပန်လာ တတ်တယ်၊ သို့မဟုတ် သူကိုယ်တိုင် လာရောက်ပြီး တောင်းပန်ဝန်ချခြင်း မပြုသော်လည်း မိမိအပေါ် ဆက်လက် ရန်မူနေခြင်း ပြုတော့မည် မဟုတ်ပါ၊ မီးကို ရေဖြင့် လုံလောက်အောင် ပက်ဖျန်းထားလိုက်သကဲ့သို့ ကိစ္စပြီး တစ်ခါတည်း အေးငြိမ်း သွားစေလိမ့်မယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ရန်မူနေတဲ့သူဟာ မိမိကိုမကြည့်ဝံ့ဘဲ တခြားဒေသသို့ အမြန်ဆုံး ရှောင် ထွက်ပြေး သွားပုံ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေက လူလောကမှာ တွေ့ကြုံလေ့ရှိတတ်လို့ ပြည့်စုံအောင် ညွှန်ကြားပေးရခြင်း ဖြစ်တယ်။
Posted by Toe Yee Yee at 1:19 AM No comments:
မောင့်ကို ပြန်မတွေ့ရပဲနှင့် ကျွန်မ မသေချင်ပါ ။
မောင် တစ်နေရာရာမှာ ငြိမ်းချမ်း ပျော်ရွှင်စွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသည် ဟု ကျွန်မ သိပြီးမှ သေချင်သည်။
မောင့်အသံကို ကြားချင်လှသည့်တိုင် ၊မောင့်စကားသံတို့ကိုနားထောင်ချင်လှသည့်တိုင် ကျွန်မ မြိုသိပ်ရပါမည်။ နောက်ပြီး အခုလေးနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်မဘက်က ဘာမှ မပြောင်းလဲပေမယ့် မောင့်ဘက်က ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီးပြီလဲမှ မသိနိုင်တာ။
နေဦး။ ကျွန်မ မောင်နှင့်ပက်သက်ပြီး ဘာမှ မမေးဘဲ နေလို့မရနိုင်ဘူးလား။ ကျွန်မကို လေးနှစ်လုံးလုံး ခြေရာဖျောက်ထားခဲ့သည့်လူကို ကျွန်မက အစအနလေးတစ်ခု ရသည်နှင့် သွေးရူးသွေးတမ်း အစလိုက်ဆွဲတော့မလို့လား။ နေစမ်းပါစေ။ မောင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ ကျွန်မ သေသွားစမ်းပါစေ။ ကျွန်မ အသေသာ ခံလိုက်ပါမည်။
Posted by Toe Yee Yee at 11:58 PM No comments:
တစ်ခါတစ်လေ ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သေလောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျနော်တို့ဟာ လူ့လောကမှ မနေချင် လောက်အောင်လည်း စိတ်ဓာတ် ကျတယ်။
ဘဝဆိုတာ ပျော်ရွင်စရာတွေကိုပဲ အမြဲတန်း ကြုံနေရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းမိုးသည်းတဲ့ နေ့လေးကို ဖြတ်ကျော် ပြီးရင်တော့ သာယာပြီး ကြည်နူး စရာကောင်းတဲ့ နေ့လေးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ဓာတ်ကျတယ် ဆိုတာဟာ လူတိုင်း လူတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်မှသာ
အောင်မြင် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါလဲရင် ပြန်ထနိုင်တဲ့ စိတ်ကလေး ကိုတော့ မွှေးမြူထားပါ။ ဘဝဆိုတာ ခဏလေးမို့ ပြီးတဲ့ အခါလည်း ပြီးသွားမှာပါပဲ။
Posted by Toe Yee Yee at 9:05 AM No comments:
တချို့လူတွေအကြောင်း ပိုသိလာတဲ့အခါ မအံ့သြပါနဲ့
တချို့လူတွေက သင့်အားနည်းချက်တွေကို တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါ မအံ့သြပါနဲ့
တချို့လူတွေက သင့်အားသာချက်တွေကို မနာလိုမရှုစိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အခါ မအံ့သြပါနဲ့
အရင်ကမပြောင်းလဲ အခုမှ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်မအံ့သြပါနဲ့
" မထင်ရဘူးနော် .... တော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းတာပဲ " ဆိုတဲ့စကားကို သိပ်မသုံးပါနဲ့
ဒီထက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်
ကိုယ်မပျက်ပါစေနဲ့ တဲ့ ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ စိတ်ထားတွေ စိတ်ဓါတ်တွေ
ကိုယ့်စိတ်ထဲက စစ်မှန်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်ကို မပျက်စီးစေပဲ
မပြောင်းလဲအောင်နေပါ မိတ်ဆွေ ။
Posted by Toe Yee Yee at 8:48 AM No comments:
ကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေ တဲ့အချိန် မှာ ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခတွင်းနက် ထဲက ဆွဲထူ ဖို့ သင် ကမ်းလှမ်းပေးခဲ့တဲ့လက်တစ် စုံအတွက် သေဆုံးသည်အထိ ကျွန်တော့်ဘဝတစ် လျှောက် လုံး မှတ်သားထားမှာပါ
တစ် နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန် သင် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက် နေ တဲ့အချိန် မှာလည်း သင့်ကို ဒုက္ခတွင်း ထဲက လွတ် မြောက် စေဖို့ကျွန်တော့် လက်တစ်စုံက အမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းပေးထားပါတယ် ဘာ့ ကြောင့် ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင် ကို သိတတ်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ခြင်းဟာ လူတိုင်း လက် ကိုင် ထားသင့်တယ်လို့ ကျွန် တော် ယုံကြည်ထားလို့ပါ
ကျေးဇူးရှင် ကို မသိတတ် ခြင်းဟာအဆိုးဝါးဆုံးအပြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးကန်းတဲ့လူဟာ ဘယ် တော့ မှ မြင့် သော နေရာတစ် ခုကို မ ရောက် ရှိနိင် ပါဘူးရောက် ရှိ လာမယ်ဆို လည်း ယာယီခဏတာအတွက် ဘဲ ဖြစ် နိင် မှာပါ
ကျေးဇူးသိတတ် သော ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ ဘယ်လိုနေ ရာ အ ခြေ အ နေမျိုးမှာဘဲ ရောက် ရှိနေ စေကာ မူ သူ့ အားကူညီမယ့်လူ များအဆင် သင့် ရှိနေ ပါတယ် အဲဒီအတွက် စာဖတ် ပရိသတ်များ အ နေနဲ့ အခါ အခွင့် အ ခြေ အ နေ မ ပေးလို့ကျေးဇူးမဆပ် နိင် ရင် တောင် ကျေးဇူးမကန်း သင့် ဘဲ ကျေးဇူးတရားကိုသိ ရှိနားလည် ကာ လက်ကိုင် ထားသင့်သည် ဟု ကျွန်တော် တိုက်တွန်းပါ ရ စေ
Posted by Toe Yee Yee at 3:59 AM No comments:
ဘယ်တော့မှ လူ့လောကမှ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် နေရဲမှာ မဟုတ်ဘူး
ကတိကို လွယ်လွယ် ဖျက်တတ်သူတစ်ယောက်ဟာလည်း
ဘယ်တော့မှ ကတိ ဆိုတာရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်လာမှာမဟုတ်ဘူး
Credit : ကောင်းကင်ပြာ
Posted by Toe Yee Yee at 11:43 PM No comments:
မင်းပေးခဲ့တဲ့ အချစ် မှာ
ငါမျှော်လင့် ခဲ့တဲ့ သစ္စာတရားတွေ
သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ ကြိုးလေးနဲ့ 
ချည်နှောင် ထားချင် လည်း ...
ရုန်းထွက် ခွင့် ပြုလိုက် ပါတယ် ချစ်သူ
^~La Min Lay~^
Posted by Toe Yee Yee at 3:56 PM No comments:
ငါတို့ခဏလောက် ဝေးနေရတာပါ..... ။
ငါတို့ပိုပိုပြီး နားလည်မှုတွေနဲ့ ချစ်ရအောင် နော်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တာ အတွက်
ကြည်နူးခြင်း အပြည့်ရှိပါစေ ချစ်သူ..... ။
ငါ့ရဲ့ အက္ခရာတွေပါပဲ..... ။
Hvance drm..... my lvr... ♡ ♡ ♡
Posted by Toe Yee Yee at 9:06 PM No comments:
လူတိုင်း အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး ။
လမ်းဘေးမှာ အသာရပ်ခဲ့ရ ။
မေတ္တာလေးတွေ ကိုပျိုးတယ် ။
နင့် ကျောပြင်လေးကို ငေးရင်း
နင့်မျက်နှာလေးကို မျှော်ပြီးတွေးတယ် ။
ဝင်ချင်ဝင် ၊ ထွက်ချင်ထွက်
နင့် အတွက် တံခါးဆိုတာ.. တပ်မထားတဲ့ နေရာပေါ့ ။
Posted by Toe Yee Yee at 5:58 AM No comments:
Posted by Toe Yee Yee at 3:20 PM No comments:
ဝေးနေ ၊ နီးနေခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲဝေးနေဝေးနေ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် သစ္စာရှိနေမယ်
ကြင်နာနေမယ် ၊ နွေးထွေးနေမယ်ဆိုရင် သက်ဆုံးတိုင်ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းသွားလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတွေ ဝေးကွာနေတဲ့ သူတွေတောင် နေ့တိုင်းမြင်တွေ့ နေနိုင် ၊ အသံလေးတွေ ကြားသိနေနိုင်နေတာပဲလေ။
ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ကြင်နာစွာ ပြောဆိုပါ၊ နွေးထွေးစွာ ပြောဆိုပါ။ စိတ်ဆိုးစေမဲ့ စကားလုံးတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ၊ သံသယကို အဝေးမှာထားပါ။
ကိုနဲ့အတူတူမရှိတာတောင်မှ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အနေအထားလေးကို သူသိအောင် ပြောပြပါ။ (ဥပမာ- နေတဲ့ အခန်းလေးက ဘယ်လို၊ သွားရတဲ့လမ်းလေးက ဘယ်လို ၊ ပေါင်းသင်းရတဲ့ သူတွေက ဘယ်လို) ဆိုတာလးကို ပြောပြပေးပါ။
အဲ့လိုပြောပြတဲ့ အခါ နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေသလိုခံစားရတာပေါ့နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေ ၊ သူ့ကို ဘယ်လောက်လွမ်းတယ်၊ သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ် ဆိုတာလေးတွေပဲပြောကြမယ်ဆိုရင်
ဝေးကွာနေပေမယ့် မနွေးထွေးတဲ့ စုံတွဲတွေ ဘယ်မှာလာရှိနိုင်တော့မှာလဲ၊၊
Posted by Toe Yee Yee at 7:56 AM No comments:
ချစ်အလိုလိုက်တဲ့ ချစ်အဖေါ် ။
ရဲရဲ လက်တွဲ ရင်ဆိုင်ဖေါ် ။
ကြင်နာအားပေး နှစ်သိမ့်ဖေါ် ။
တီးတိုး ရင်ဖွင့် တိုင်ပင်ဖေါ် ။
ကူကူညီညီ ဖေးမဖေါ် ။
အမြဲ မခွဲ နေသူ အဖေါ် ။
ကတိမြဲမြံ မှန်ကန်ဖေါ် ။
အမိ ပုံ တစ်သွင်
ဘဝအဖေါ် ချစ်သူ ခေါ်၏ ။ ။
Thway Sat Thit
Posted by Toe Yee Yee at 5:09 AM No comments:
ဘဝင် မြင့်ဖို့ မဟုတ်တာကို
လက်နက် ရှိတာကို မမေ့ပါနဲ့ ။
အဆိုးဝါးဆုံး ပျက်စီးမှု့ က
မမေ့ လိုက်ပါနဲ့ ။
ဆိုက် ကပ် ရာအရပ်ဟာ
ငြိမ်းလဲ့ Page မှ။
# လက် #
တွန်းလှဲဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
လဲနေသူကို တွဲထူဖို့ ။
# ခြေထောက် #
ကန်ကြောက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
လမ်းမှန်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ။
# ပါးစပ် #
အတင်းပြောဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
အချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်ဖို့ ။
# ဦးနှောက် #
သုံးသပ်ဖို့နဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ။
# စိတ်ဓာတ် #
ယုတ်ညံဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
ကြည်လင်အောင် ဖြူစင်ဖို့ ။
# မာန #
ထောင်လွှားဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
မခံချင်စိတ်နဲ့ ရိုးသားစွာ ကြိုးစားဖို့ ။
# အတ္တ #
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
သူဖက် ကိုယ့်ဘက် ညီမျှဖို့ ။
# ဒေါသ #
ပေါက်ကွဲဖို့ မဟုတ်ဘူး ၊
လျော့ကျသွားအောင် လျှော့ချဖို့ ။
# မိမိရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ အမူ ၊ အကျင့်တွေကို
မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ကြပါစို့ ။
Minkha Soe San
Posted by Toe Yee Yee at 3:46 AM No comments:
လောကမှာ ရှိမှ မရှိဘဲကိုး။
လို့ သေတမ်းစာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခြေခံ အဆောက်အဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Toe Yee Yee at 12:33 AM No comments:
ဟောဒီ ကောင်းကင် တစ်ရိုးက
အိုးကြီးလဲ ဗိုက်ပွင့် ကွဲကြေ
လင်းတစက်စက် စီးဖြိုင် ညွှတ်ကျ…။
ပါးစပ်ကြီးတွေ ပြဲလန်အောင် ဟလို့ပေါ့…။
လူဟာ ကိုယ့်ဖာသာ လျှောက်ရဲရမယ်ကွယ့်…။
ဂျိုးဂျိုး ဂျိမ့်ဂျိမ့် လှပ
ရှိုက်ကြီးတငင် ရွာချပါစေလားကွယ် ………။ ။
Posted by Toe Yee Yee at 7:13 PM No comments:
အရာရာတိုင်းဟာ စမတ်ကျကျ ဖြစ်နေရင်
အဲဒါကို လောကလို့ မခေါ်ဘူးကွ
မင်းစိတ်ဓာတ်ကျပေမယ့် စိတ်ကိုတော့ မလျှော့လိုက်နဲ့
ရေးသားသူ- ဦးကောဝိဒ (၀စီပိတ်ဆရာတော်)
Posted by Toe Yee Yee at 7:50 AM No comments:
အဝေးကိုခေါ်သွားစေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ... By: Matsuri Pan
Posted by Toe Yee Yee at 10:33 PM No comments:
နာနာကျင်ကျင် တုတ်ချီထားတာ မဟုတ်
သာသာညင်ညင်ပါ ငုတ်ဆီမှာလို မလှုပ်
ပြန်ရုတ်တဲ့ လက်ကိုတောင် အပူက
ရစ်ပြီးရင်း ရစ် နစ်ပြီးရင်းနစ်
စက္ကန့် မိနစ် ဘယ်တော့မှ သတိမလစ်
အချစ်နဲ့ ထပ်တူ အသက်နဲ့ထပ်မျှ
မဖြေသာလဲ ချစ် ဖြေသာလဲချစ်
ဘာဖြစ်ဖြစ် ချစ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ချစ်
လှုပ် လှုပ်ရင်းနဲ့ မြုပ်
ကြိုးတွေကြားမှာ အလုပ်ရှုတ် ။ ။
Posted by Toe Yee Yee at 9:52 AM No comments:
ငါ့ကို" နိုး" လို့ငြင်းခဲ့တဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်
Posted by Toe Yee Yee at 3:57 AM No comments:
အမြဲလိုလို စိတ်မချမ်းသာရဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပြီ
အဲဒီအချစ်ဟာ အတုအယောင်ပဲ ။ ။
Posted by Toe Yee Yee at 12:49 AM No comments:
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံ နဲ့ ကျွန်တော်
အိမ်ထောင်သည်ဆိုတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်ခဲ့တာ ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်တိုင်ခဲ့လေပြီ ။ သည်ဘ၀မှာ မင်းပျော်လားလို့ မေးလာခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြေရပါ့ ။ * အတွေ့  * တစ်ခုရဲ့ ဆွဲငင်ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို
အသိမဲ့စွာ လိုက်ပါခဲ့ရင်း အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရသည် ။။အမြင် ၊ အကြား ၊ အထိအတွေ့ ၊ အရသာတွေကို အယူမှားကာ မြတ်နိုးခုန်မင်ခဲ့မိပါသည် ။ ကာမဂုဏ်မှာ ပျော်ပိုက်နေသူ လူသားတစ်ဦး ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာခဲ့မိသည် ။ ကာမဂုဏ်ဆိုတာ ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမနှစ်ဦးသား ကြည့်နူးပေါင်းဖက်ခြင်းလို့ ဆိုလိုသည် ။ အဲဒါထက်ကျော်လွန်ကာ မိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ အရာကို ပါကျူးလွန် မိခဲ့သူ ကျွန်တော် ။ မိစ္ဆာစာရဆိုတာကတော့ အဲဒီလိုပေါင်းဖက် အ တူနေတာကို မိမိလင်ယောင်္ကျား မိမိဇနီးမယားမဟုတ်တဲ့ သူများအပေါ်မှာ မှားယွင်းစွာ လွန်ကျူးတာ ကိုပြောတာပါ ။
ကျွန်တော် ရောက်နေတာက ရေမြေခြား ။ လွပ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရသာကိုဖောဖော်သီသီ အသုံးချလို့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပေါ့ ။ မိဝေး ဖဝေး မှာ ကိုယ်နဲ့ နေ့စဉ် ပတ်သတ်နေသူ အများစုက တိုင်းတပါးသား ။ လူမျိုးတူ အများစုက တနယ်ဆီက ရောက်လာ ကြသူတွေ ။ မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရောက် ပါလျှင် တွေ့ဖို့ ဆုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူ။ ဒီတော့ခေါင်းထဲရောက်လာတာက ငါဘာလုပ်လုပ် ဘယ်သူမှ မသိပါဘူးကွာဆိုတဲ့ သေးသိမ်တဲ့ အတွေးခေါ်တွေ ။ လူတွေလွတ်လပ်ပြီဆိုရင် အကျိုးနဲ့ အပြစ် အပြစ်ကိုသာ ပိုလုပ်မိကြတဲ့ လူတွေထဲ ကျွန်တော်လည်း တစ်ယောက်အပါဝင်ပေါ့ ။ မိတ်ဆွေစစ်နဲ့ မိတ်ဆွေတုဆိုတာကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ အသိညဏ်တွေနဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့သူတစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ရေမြေခြားမှာ နေလာတာ နှစ်လေးလည်း အတန်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အလုပ်လေးတွေလည်း စုံခဲ့လေပြီ ။ ခုလက်ရှိနောက်ဆုံးလုပ်နေတဲ့နေရာမှာ မြန်မာပြည်သားတွေ အများသား ။ ဒီထဲကကဲလို့ တွဲလို့ကောင်း တဲ့ သူချင်းပေါင်းမိခဲ့ကြသည် ။*အပျော်ပါးလိုက်စားမလား တူတူ ။ သောက်ကြစားကြမလား လက်ရေတစ်ပြင်တည်း။ စိတ်တူကိုယ်သူဆိုတာမျိုးပေါ့ ။ တစ်နေ့မှာတော့ တူတူနေတဲ့ ကိုထူးက စကားစလာပါတယ် ။**ဟေ့ကောင် မောင်မောင် ။ မင်းပျော်ပါးဖို့ ဆော်ခေါ်ရတာ ပိုက်ဆံကုန်တယ် ကွ ။ ငါသတင်းတစ်ခုရထားတယ် ။ ဆော်ကြီးတစ်ဗွေ လူကလန်းတယ် ။ ရေကလည်း လန်းတယ် ။မင်းချဉ်းကပ် လို့လည်း လွယ်တဲ့ အနေထားမှာ ရှိတယ် ။ **ဟုတ်လား ။ သူက ဘယ်မှာနေတာလဲ ။ အပျိုလား *
*ဘယ်ကလာ အပျိုရမှာလဲကွာ ။ မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ထောင်ကျတယ် ။ ကလေးတောင် ရှိတယ်ထင်တယ် ။ နောက် ဒီရောက်လာတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်။ သူ့အမျိုးသား က တော်တော် ချစ်တယ် လို့ ပြောကြတယ် ။ သူဖောက်ပြန်နေတာတွေကို သိလည်း ခွင့်လွတ်ပြန်ပေါင်းတယ်တဲ့လေ ။ နေတာက ငါတို့ဆီကနေကားနှစ်မှတ်တိုင်လောက် ဘဲဝေးတယ် ။ မင်း စိတ်ဝင်စားရင် ငါ မိတ်ဆက်ပေးမယ် *ဒီလိုကနေစလိုက်တာ သူမ ကျွန်တော် သိခွင့်ရခဲ့သည် ။ ခင်မင်ရာကနေ တစ်ဆင့်တက်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါသည် ။ သူမ အမျိုးသား အလုပ်သွားချိန်တွေ ကျွန်တော် အလုပ်နားချိန်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တိုင်း သူမနှင့် ကျွန်တော် တွေ့ဖြစ်နေကြသည်။ ကုန်လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံက ဆော်ခေါ်တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ခိုးစားနေမိတဲ့ ဇာတ်လိမ်းကို သူမခင်ပွန်းသိသွားပါတော့သည် ။ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကောင်လည်း ပြင်ဆင်ချိန်တောင် မရလိုက်ဘဲ သူမကို လက်ခံလိုက်ရပါတော့သည် ။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်ထောင်သည်မကျ ချစ်သူမကဆိုတဲ့ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဘ၀ တစ်ခုကို နာမည်ဆိုးတွေနဲ့ ရရှိလိုက်ပါတော့သည် ။ သူများလက်ထဲကနေ ခိုးယူထားမိတဲ့ အရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်မှာလာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် နေနိုင် ပါမည်နည်း ။အမြဲတစေ ပူပန်သောကတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေခဲ့ရသည် ။ ငါအလုပ်သွားရင် သူမ ဘာတွေ လုပ်နေမလဲ ။ ဘယ်တွေ သွားနေမလဲ ။ အိမ်မှာကော ရှိနေပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အလုပ်ထဲမှာ ပစ္စည်းတွေကမှား ။ ဒီတော့ စူပါဗိုက်ဆာတွေရဲ့ ငြိုငြင်မှုတွေကို ခံလာရပါတော့သည် ။ အလုပ်တွေ ဘယ်လောက် အိုတီရနေနေ ရသမျှ အဖက်မတင် ။ ဘယ်အပေါက်ကနေ ဆီလိုပေါက်ရှာ ထွက်နေမှန်းမသိ ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လုံးပါးပါးလာခဲ့ရပါတော့သည် ။
ငါ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရသိက္ခာပုဒ်ကို မစောင့်ထိမ်း လို့ဖြစ်ရတဲ့ လူမှုဒုက္ခတွေပါလားလို့ တစ်ခါ တစ်ခါ တွေးမိပါသည် ။ တစ်နေ့ အင်တာနက် ကြည့်နေရင်း မထင်မှတ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေး တစ်ခုကို ဖတ်လိုက်မိသည် ။ ဆောင်းပါးလေး က ကာမေသု မိစ္ဆာရာ ကံ လွန်ကျူးရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ရေးသားထားပါသည် ။
*ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိသိက္ခာပုဒ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်လင်အမျိုးသား ကိုယ်ပိုင်ဇနီးမယားကနေ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ( သို့မဟုတ် ) သူ့တပါး သားမယားကို လွန်ကျူး ပြစ်မှားလို့ အပြစ်သင့်တဲ့ အပြစ်ဖြစ်တဲ့ သိက္ခာပုဒ်ပါ၊ ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ ကာမဂုဏ်ဆိုတာ ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမနှစ်ဦးသား ကြည့်နူးပေါင်းဖက်ကြတာကိုခေါ်တာပါ၊ မိစ္ဆာစာရဆိုတာကတော့ အဲဒီလိုပေါင်းဖက် အ တူနေတာကို မိမိလင်ယောင်္ကျား မိမိဇနီးမယားမဟုတ်တဲ့ သူများအပေါ်မှာ မှားယွင်းစွာ လွန်ကျူးတာကိုပြောတာပါ၊
အဲဒီသိက္ခာပုဒ်ကိုဖောက်ဖျက်ရင် စောစောကပြောခဲ့သလိုပါ ပဲ လူမှုဒုက္ခတွေ အများတံတွေး ခွက်ပက်လက်မျောရတာတွေ အစရှိတဲ့ဆိုးကြိုးတွေကို ခံ စားရမှာပါ၊ ခုခေတ်မြန်မာလူဘောင်လောကမှာ ကိုယ်အချင်းချင်းသဘောတူရင် မပြစ်မ ဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းအယူအဆတွေ ၀င်ရောက်လာပါတယ်၊ အမှန်က အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်အချင်းချင်းဘယ်လိုပဲသဘောတူနေပါစေ ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်၊ အောက်ထစ်ဆုံး အများတကာနဲ့ ဆက်ဆံသွားလာ တဲ့ မကောင်းတဲ့ပြည်တန်ဆာမတောင် အရင်လူကပိုက်ဆံပေးငှါးရမ်းထားရင် နောက်လူ ကပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ သွားရောက်လွန်ကျူးမယ်ဆိုရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစရာကံထိုက်ပါတယ်၊ *
လို့ ရေးသားထားပါသည် ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဲကွန်းခန်းထဲ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်လုံး အလိုအလျောက် ဇော်ချွေး များ ပျံလာမိသည်။
(၁၁) ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ကွဲကွာကာ အသည်းနာရခြင်း၊ ဆိုတဲ့ အပြစ်တွေကိုပါ ရစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ သွေးထွက်အောင် မှန်နေခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့
*မောင် ထမင်းစားရအောင်ဆိုတဲ့ *
သူမရဲ့ ခေါ်သံကြားမှ စိတ်နဲ့လူကြား ကင်းကွာနေတဲ့
အသိတွေ ပြန်လည်စုမိကြပါတော့သည် ။ အရင်က ချိုသာလှပါသည်ဟု ထင်ခဲ့မိသော သူမ အသံသည် ကြောက်မက်ဖွယ် ထောင်ခြောက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ထင်မှတ်စေခဲ့လေပြီ ။ ခုချိန်ထိ မိဘတွေကိုအသိမပေးရဲသေးတဲ့ သူမနဲ့တူတူနေထိုင်နေရတဲ့ ဘ၀ ။
အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေ နဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ကျွန်တော် မိန်းမပါလို့ မိတ်ဆက်ပေးရမှာကို အင်မတန်ဝန်လေး ခဲ့မိတာတွေဟာ ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် သိမ်ငယ်နေခြင်းတွေဆိုတာ သိခဲ့ရပေမယ့် အမှားပြင်ဆင်ခွင့်က ဘယ်မှာလဲ ။ ဘယ်လို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်မှ ပျက်မယ့် အမှားမျိုးပါလည်း ဆိုတာ တွေးရလွန်း လို့ ခေါင်းတွေအမြဲပူပန်နေရသူ ကျွန်တော်ဘ၀ ။ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်း ကိုယ်လျှောက်နေရပေမယ့် ဘာလို့မပျော်ရသလဲ ။ အဖြေက ရှင်းပါတယ် ။အမှားဆိုတဲ့ လမ်းတစ်ခု ကို ရွေးချယ်လျှောက် လှမ်းမိခဲ့တာကို ။
တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော် အလုပ်ကနေ သူမဆီ ဖုန်းမဆက်ဘဲ ပြန်လာခဲ့ပါသည် ။ အပြန်လမ်းမှာ မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာနေခဲ့သည် ။ မိုးရေတွေ ဆက်လက်နဲ့ အိမ်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါ သည် ။ ကြိုဆိုမယ့်သူမရှိ ။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေ စိုးမိုးနေတဲ့ အ်ိမ်ထဲမှာ သေချာပါသည် သူမ ရှိမနေဘူးဆိုတာပေါ့ ။ အ၀တ်စားတွေလဲ ပြီး ဆေးတစ်လုံးကြိုသောက်ထားလိုက်ပါသည် ။ ခုရက်တွေ ကျွန်တော်နှ လုံးတွေ အောင့်အောင့်နေတတ်သည် ။ ဆေးသောက်ပြီး အိပ်ယာထက်မှာ လဲလျောင်း ရင်း မျက်လုံးတွေက ဖုန်းလေးကို အဓိပ်ပယ်မဲ့စွာ ငေးကြည့်နေမိဧ။် ။ သူမကို ခုချိန် ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ဘာတွေ ဆင်ခြင်ပေးမလဲ ။သူပေးလာမယ့်ဆင်ခြင်တွေကို ကျွန်တော် ယုံကြည်နိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်တော် စိတ်တွေအားလုံးယောက် ယက်ခတ်နေသည် ။ အစက မဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းသားဆိုတဲ့ နောက်ကြောင်းလှန်တဲ့ အတွေးတွေ ကလည်း တသီကြီးတွေးလို့ ။ ကျွန်တော် ကံကောင်းခဲ့သလား ကံဆိုးခဲ့သလားတော့ မပြောတတ်ပေ ။ ထိုညကအစပြုလို့ ကျွန်တော်ဘ၀ထဲကို သူမပြန်ရောက်မလာတော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် တမ်းတမိပါသလား ။ သေချာပါသည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ တွင်သာ ရေးရေးလေး အမှတ်ရမိတတ်ပါသည် ။ သတိရခြင်းနှင့် အမှတ်ရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ ရဲ့ အနှစ်သာရ လားလားမျှ မတူညီပါ။
ကျွန်တော်သူမကို သတိမရပါ။ အမှတ်ရဖြင်းသာ ရှိပါသည် ။ နိုင်ငံခြားရောက် တူတူနေခြင်းဆိုတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကို ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်း ရနိုင်ဧ။်ပေါ့ ။ သို့သော် အိမ်ထောင်သည်တွေလို တူတူ
နေထိုင်ခဲ့မိဘူးသည် ။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကြီးကတော့ဘ၀မှာ အမဲစက်တစ်ခုလို နေရာယူခဲ့ပါပြီ။ ဒီအမှားကို ဘယ်အရာနဲ့ ဖျက်ရမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို နေ့စဉ်ရှာဖွေနေသူ လူသားတစ်ဦးအဖြစ် သေသည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်ရပ်တည် အဖြေရှာနေရအုံးမည်သာ ဖြစ်နေတော့သည် ။
ဒီဝထ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ရှု့ပြီး မိတ်ဆွေစစ်နဲ့ မိတ်ဆွေတုကို ခွဲခြားနိုင်ပါစေ ။ ကာမေသုကံကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီး ဒီအမျိုးသား ၊ ဒီဇနီး ဒီမယား တွေနဲ့ ပျော်ရွင်ကြည်နူးဖွယ် မိသားစုတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ။ သစ္စာတရားတွေ စိုးမိုးတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး
လူဗိုလ်ဟူသည် မှ ကူးယူမျှဝေပါသည်..
သင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Posted by Toe Yee Yee at 10:42 AM No comments:
ပြန်မပြောရင်သဲသဲလှုပ် ၊အသံလေးများမကြားရရင်နေ့ညတွေခြောက်ခြား ၊
တနေ့လေးများမမြင်ရရင်နေမထိ ထိုင်မသာ ၊
စားလို့များမကောင်းဘူးဆိုပြေးချက်ပေးချင်စိတ် တဖွားဖွား ၊
အချစ် "ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုခွဲမသွားဘူးနော်...လို့ "
Posted by Toe Yee Yee at 12:41 AM No comments:
မင်းသုည ( ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် )
Posted by Toe Yee Yee at 10:25 PM No comments:
Posted by Toe Yee Yee at 10:51 AM No comments:
၁။သင်ဟာဘယ်လောက်ပဲသန်မာ၊ရင့်ကျက်သူပဲ ပြောပြော၊သင့်ကိုအားနည်းသွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းသူ
ကတော့ လောကမှာ ရှိစမြပါပဲ။
၂။ ဆိုရှယ်ကျကျ မနေထိုင်သူ အချို့ဟာ အမှန်တော့ ဟန်ဆောင် အပြုံးနဲ့ ဟန်ဆောင် မာယာ ဒရာမာ များ ကို မနှစ်သက် မလိုလားသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိသာ ပျော်ရွှင်ဖို့ တာဝန်ရှိပြီး ဒီအတွက် သူတစ်ပါးကို ကူညီ ရှာဖွေ ဖန်တီးခိုင်းနေရင် ပိုလို့သာသ စိတ်ညစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
၄။ သင်လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့သူကို အမှန်တကယ်တော့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရပြီး ဖယ်စွန့်ခွာ လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အပော်ရွှင်ဆုံး ခံစားချက် တစ်ခုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေဟာ အတိတ် အတွက် နောင်တ မရကြ ပါဘူး။ ကောင်းကျိုးမရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ရလေခြင်း ဆိုတဲ့ နောင်တ မျိုးသာ ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။
၆။ သင် ဒါမျိုး အခွင့်အရေး နောက်တစ်ခါ မရဘူးလို့ သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဘဝဟာ ပိုလို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိနေ တတ်ပါတယ်။
၇။ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး နေတတ်သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အထီးမကျန် ပါဘူး။
၈။ ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ဟ ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ မထိုက်တန် ရင်တောင်မှ မိမိဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ထိုက်တန်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အထီးကျန်မှုဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းရှိနေတာကိုမှ မဆိုလို ပါဘူး။ မိမိနဲ့ မပေါင်းသင့် မပေါင်းအပ်သူတွေနဲ့ ဝန်းရံ နေထိုင်နေမှုကလည်း အထီးကျန်ခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အင်မတန် ရက်ရော ပြူငှာ၊ အားနာ တတ်သော သူများဟာ တုံ့ပြန်မှုများကို ပိုလို့ ထိရှ၊ ခံစားလွယ် ပါတယ်။
Ref : psycho-facts
Posted by Toe Yee Yee at 2:43 AM No comments:
ရှာဖွေကြည့်ရှု တစ်ခုမက နှစ်ခုမက
ဒါပေမယ့်သိ ထိတွေ့လို့မရ အနံ့ရဖို့ မမြင်
ခုံမင်မှု ထွေပြားေ၀၀ါးဖို့ အရာ
မေတ္တာစေမှ မေတ္တာတွေ မိုးလိုဝေ
သစ္စာပျိုးမှ သစ္စာတွေ မိုးလိုစွေ
ရှာတိုင်းလဲမရ ချစ်တိုင်းလဲ မဖြစ်
တစ်ဆိုမှ တစ် နှစ်ဆိုရင် လစ်
ဟောအဲဒီ အပြင်က အချစ်မှာတော့
သာစွ သာစွ ထာဝရ ထာဝရ
လပြည့်ညလေးလို အေးအေးမြ ။ ။
Posted by Toe Yee Yee at 8:32 AM No comments:
ကျွန်မ ချစ်တဲ့ သူ က
ကျွန်မ ကတော့ အချစ်ဆို တာ
ကျွန်မက အချစ်ဆိုတာ ရယူပိုင်ဆိုင်
ခြင်းလို့သတ်မှတ်ထားသူပါ
သူကိုလည်း ကျွန်မ ဆက်ချစ်ရလောက်အောင်
THE END ;( ;(
Posted by Toe Yee Yee at 9:28 AM No comments:
R E V E N G E ……
လက်စားချေခြင်း … ဆိုတာ ချိုမြိန်ပါသလား …
အစော်ကားခံခဲ့ရသူ တစ်ယောက်အတွက်ကတော့ …
သူခံစားခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးမှုနဲ့ ထပ်တူ ချိုမြိန်ပါလိမ့်မယ် …
၀ိုင်တစ်ခွက်လို အချိန်ကြာကြာ စောင့်ရလေ … ပိုလို့ ချိုမြလေ …
သူ့အပေါ် နာကျင်ခံစားစေခဲ့မှု များလေ … စိန်တစ်ပွင့်လို ပို လို့ တောက်ပလေ …
တစ်ချို့သူတွေက သူတစ်ပါးကို ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောထား …
အလွယ်တကူ စော်ကားတတ်ကြတယ် …
ပြီးတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ မေ့လျော့လို့ …
ခံခဲ့ရတဲ့သူက မမေ့ဘူး …
အချိန်ကြာမြင့်လေ လက်စားချေဖို့ အခြေအနေနဲ့အချိန် ပိုရလေ …
ကိုယ်ပြန်ခံရချိန်မှ တောင်းပန်လို့ နောင်တရလို့ … နှောင်းခဲ့ပြီ …
လက်စားချေသူအပြစ်လား … စတင်စော်ကားသူ အပြစ်လား …
တကယ်တော့ ကိုယ်ချင်းစာ တရား တစ်ခုပဲ လိုအပ်ခဲ့တာပါ …
စတင်စော်ကားသူက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မဲ့ခဲ့လို့ …
လက်စားချေခြင်း ( Revenge ) ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာရတာပါ …
Posted by Toe Yee Yee at 4:52 AM No comments:
ချစ်ဖွယ့်လူသား ။ ။
လိုရာပြီးမြောက် ခရီးပေါက်သော လက်တွေ့ ရေမေတ္တာပွားနည...